Warshadda Mashiinka Slimming | Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Mashiinka Shiinaha
Vacuum rf rogid cellulite dufanka ka saarista duugista mashiinka khafiifinta vela
Waxqabadka kooban ee Plushape: 1. Laydhka infrared-ka wuxuu yareynayaa carqaladda maqaarka iyadoo diirineysa maqaarka iyo tamarta RF waxay si qoto dheer u dhex gelaysaa unugyada isku xira. Isku-darka isku-dhafka ah ee laysarka infrared iyo tamarta RF ee la qabtay waxay kordhisaa faafitaanka oksijiinta intracellular iyadoo maqaarka la kululeynayo. 2. Vacuum oo lagu daro rollersyo si gaar ah loo qaabeeyey ayaa khalkhal gelinaya keenista RF inay ahaato xitaa 5-15mm. Isla mar ahaantaana, faakiyuumka iyo duubista mashiinka farsamaynta mashiinka mashiinka iyo fidiya unugyada isku xirka fibrillar, wax ku ool ah ...
Nidaamka Jidhku Ugu Fiican yahay 4 Qabashada Baruurta Qaboojiyaha Mashiinka Cusub ee Fda Cryolipolysis Qalabka Slimming
Aragtida shaqada ee mashiinkan: Triglyceride ee dufanka ayaa loo rogi doonaa mid adag gaar ahaan heerkul hooseeya. Waxay adeegsaneysaa tikniyoolajiyad baruur barafaysan si ay si xushmad leh u bar-tilmaameedsato baruurta ugana tirtirto unugyada dufanka iyadoo loo marayo geeddi-socod tartiib-tartiib ah oo aan waxyeello u geysanaynin unugyada ku xeeran, yareynta dufanka aan loo baahnayn, marka unugyada baruurta ay la kulmaan qaboojin sax ah, waxay kiciyaan geeddi-socodka ka-saarista dabiiciga ah ee si tartiib tartiib ah u yareysa dhumucda lakabka dufanka. Unugyada baruurta ee aagga la daweeyayna waa kuwo si tartiib tartiib ah u ...
Qiimaha tartanka HIEMT EMS jirka isku xira mashiinka mishiinka kiciya miisaanka mishiinka khafiifinta iibinta
Waa maxay HI-EMT? Qalabka HI-EMT oo loogu talagalay ujeedo bilic leh, oo leh 2 (laba) codsadeyaal leh xoog sare. Waa tiknoolajiyad goos goos ah oo ku jirta qaabdhismeedka jirka ee aan waxyeellada lahayn, maadaama aysan ahayn oo keliya gubista baruurta, laakiin sidoo kale waxay dhiseysaa Muruq. Intaa waxaa sii dheer, daaweyntu uma baahna suuxdin, jeexitaan, ama raaxo la'aan. Xaqiiqdii, bukaanku waxay awoodaan inay dib u fadhiistaan ​​oo ay nastaan, halka qalabku sameeyo wax u dhigma in ka badan 20,000 xoqan oo aan xanuun lahayn ama squats. Faahfaahinta Tiknoolajiyada EMS Murqaha Korontada ...
Anti-gabowga Wrinkle Remover Waji Qaadista Radar Line RF Ice monopolar rf maqaarka oo adkeynaya
4Deepoo waxay bixisaa horumar farsamo oo muhiim ah oo ku saabsan daaweynta soo-noqnoqodka raadiyaha ee daaweynta leh faakuum-ka-caawinta. Si ka duwan tiknoolajiyada Monopolar ama Bipolar RF, kuwaas oo dusha sare ah oo inta badan xanuun iyo khatar ku noqon kara epidermis, 4Deepoo, iyada oo aan lahayn wax baalal ah laakiin ay ku xiran tahay qalab dhexdhexaad ah oo la dajiyay, ayaa bixisa tamarta kuleylka ee la xakameynayo qoto dheer ee maqaarka maqaarka waqtiga ugu gaaban, oo gaaraya 48 ° C ~ 58 ° C, oo leh kuleylka epidermal ee ugufiican, dib-u-hagaajinta collagen aan xanuun lahayn. 4Deepoo wuxuu ka kooban yahay Lahjad ...
Cavitation-ka ugu cusub + RF + Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee jirka lagu daweeyo Velashape
2020 ikhtiraaca cusub ee xoojinta muruqyada oo yareynaya quruxda caatada ah ee jilicsan ee mashiinka HIMET
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Laser Epilator Ipl, 3 Gudaha 1 Ipl, Diode Timo Goynta Laser Guriga, Opt Shr Ipl Timaha Jooji, Ipl Xenon Flash Siraaj, Module Laser 808, Dhammaan Alaabooyinka Qolka 308, No.12, Jingsheng South 2nd Wadada, Degmada Tongzhou, Beijing, Shiinaha